H2O NaCl = Cl2 H2 NaOH | Isu dheellitirka Kiimikada
chloride sodium = sodium hydroxide
biyaha chloride sodium koloriin hydrogen sodium hydroxide
(lng) (dd) (kh) (kh) (dd)
(xoog leh) (trung) (dib u eeg) (xoog leh) (xoog leh)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O (biyaha) ay kula falgalaan NaCl (sodium chloride)?
Xaaladda Kale: xuubka elektroolka ah
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Cl2 (chlorine) iyo H2 (hydrogen) iyo NaOH (sodium hydroxide)?
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan NaCl (sodium chloride)
Natri hiroxide waxaa soo saaray elektrolytka NaCl oo dheregsan. Taangiga elektroolka ah wuxuu leeyahay diaphragm u dhexeeya cathode iyo anode. Waxay ku ururin karaan gaaska hydrogen-ka ee ku jira cathode, koloriin ku jirta anode, iyo NaOH taangiga.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Cl2 (sodium chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cl2 (chlorine) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2 (sodium chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2 (hydrogen) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaOH (sodium chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaOH (sodium hydroxide) badeecad ahaan?
(lng) (rnn) (kh) (kh) (dd)
koronto kuleylka kulul ee dhalaalay NaCl